Ihe okike okike nke uwe eji akwa akwa
A pụkwara ikwu na nwughari akwa bụ ụdị nke abụọ nke akwa akwa. Ọ na-ezo aka na nke abụọ nhazi nke okokụre akwa dị ka imewe kwesịrị na-emepụta ọhụrụ nka mmetụta. Ọ bụ ndọtị nke mmebe echiche na nwere enweghị atụ ọhụrụ. Ọ na-eme ...
1. chiffon Keakamere snow bụ adịghị ke ndaeyo uwe ákwà, mere nke chemical eriri ihe onwunwe, bụ wheel nke ngwaọrụ. Chiffon ákwà ndọlị na-eguzogide ọgwụ zuru oke, na elu ahụ nwere ọmarịcha anụ ahụ, nke dị jụụ, nke na-enye ume ọhụrụ, otu esi eyi otu ọ dị mma. Ma chiff ...
1. linen linen linens, enweghị isi na-ekwu, bụ ndị na-agba ọsọ-elu n'oge okpomọkụ uwe. Ọ na-ekwe ka anụ ahụ na-eku ume, mana ọ na-enye ume ọkụ anaghị enye gị ọsụsọ ọkụ, enweghị nsogbu ọkụ eletrik, dịkwa nro na-emetụ aka, ndị na-arịa nfụkasị bụ enyi na enyi. Ọzọkwa, akwa ahụ n'onwe ya dị ezigbo njọ ...